Ngwọta njehie "com.google.process.gapps usoro akwụsịla" | Akụkọ akụrụngwa
Ignacio Sala | | Mobiles, software, Nkuzi
Otu n'ime nsogbu ndị gam akporo na-eche ihu na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dakwasịrị ahịa, abụwo ndakọrịta na ngwaọrụ ebe arụnyere ya, ebe ọ bụ na e meghị ya kpọmkwem maka ngwaike ụfọdụ, dịka a ga - asị na ọ na - eme Apple na iOS na iPhone. Nke a, na ọ dịghị ọzọ, bụ isi nsogbu ndị nrụpụta na-ezute mgbe ha na-emelite ngwaọrụ ha na nsụgharị ọhụrụ, ebe ọ bụ ọ bụghị nanị na ha nwere na-ebuli gam akporo version na ha ngwaọrụHa ga-agbakwunye usoro obi ụtọ nke ịhazi onwe.
Mana n'agbanyeghị nke ahụ, anyị nwere ike ịchọta nsogbu ọ bụla, ma ọ bụ n'ihi nsụgharị gam akporo nke edobeghị nke ọma maka ụdị njedebe anyị, ma ọ bụ n'ihi akwa oyi akwa. Otu n'ime njehie ndị kachasị emetụta ngwa abụọ na arụmọrụ nke njedebe. N’isiokwu a anyị ga-elekwasị anya na Idozi "com.google.process.gapps usoro akwụsịla" njehie, njehie na n'ọtụtụ ọnọdụ anaghị ekwe ka anyị budata ngwa site na Playlọ Ahịa Google.
Njehie a malitere ịpụta na gam akporo Kitkat 4.4.2 ma kemgbe ahụ ọ dị ka ụmụ okorobịa na Google enweghị nsogbu ịchọpụta azịza nke na-anaghị amanye ndị ọrụ ka ha banye na ịntanetị, ebe ọ bụ na n'ụdị ọhụrụ nke gam akporo At oge nke edere isiokwu a anyị nọ na gam akporo 8.0 Oreo, ọ ka bụ nsogbu karịa ugboro ugboro n'ọtụtụ ọdụ. N'okpuru ebe anyị na-enye gị usoro dị iche iche maka nsogbu a, na-ezere ihe ngwọta kasị sie ike n’oge niile nke mejuputara ike iwegharia ngwaọrụ ma kpochapu ọdịnaya ya.
1 Hichaa oghere nke ngwa nke na-enye anyị nsogbu
2 Hichapụ ngwa ọhụrụ ị rụnyere
3 Hichapụ mmelite kachasị ọhụrụ nke ibudatara
4 Tọgharia ngwa mmasị
5 Hichapụ data sitere na ọrụ Google Play
6 Ngwaọrụ nrụpụta ụlọ
Hichaa oghere nke ngwa nke na-enye anyị nsogbu
Ọ bụrụ na njehie a na-eme oge niile oge ị mepee ngwa, ọ ga-abụ na ngwa ahụ n'onwe ya bụ nke ahụ na-akụda ya na sistemụ ahụ, yabụ ihe mbụ anyị ga - eme bụ kpochapu ya.
Ikpochapụ ngwa nzuzo ngwa ngwa, naanị anyị ga-aga Ntọala> Ngwa ma họrọ ngwa a na-ekwu. Mgbe ịpị ya, anyị anaghị aga ala na pịa Clear cache.
Hichapụ ngwa ọhụrụ ị rụnyere
Mgbe anyị chọtara nsogbu ahụ na ngwa arụnyere na ngwaọrụ anyị ruo nwa oge, ọ ga-ekwe omume na ọ dị na ikpeazụ ngwa anyị wụnye, ihe dị mwute ikwu na ọ bụ ihe zuru oke na gam akporo.
Iji dozie nsogbu a na-arụ ọrụ, ihe mbụ anyị ga-eme bụ iwepụ ngwa ahụ, ma ọ bụ ozugbo site na Ntọala> Ngwa, ma ọ bụ site na ngwa ndị ọzọ nke na-enye anyị ohere ịrụ ọrụ a.
Hichapụ mmelite kachasị ọhụrụ nke ibudatara
Ọ bụrụ na anyị etinyela ngwa ngwa ahụ, ọ malitela igosi anyị ozi ahụ, enwere ike ịchọta nsogbu ahụ na emelitere ikpeazụ nke ngwa anyị rụnyere, yabụ ịchịkwa nsogbu, ihe mbụ anyị ga - eme bụ iwepụ mmelite ahụ.
Iwepụ mmelite, anyị na-alaghachi na Ntọala> Ngwa wee họrọ ngwa a na-ekwu. N'elu, anyị na-achọta nhọrọ nkwụsị Force na Iwepụ mmelite. Site na ịhọrọ nke ikpeazụ, ngwaọrụ anyị ga-ewepụ akara ọ bụla nke nwelite ikpeazụ wee hapụ ngwa ahụ dịka ọ dị na mbido, mgbe ọ rụrụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi.
Tọgharia ngwa mmasị
Ngwọta ikpeazụ anyị na-agwa, tupu ịbanye n'ime gịnị ọ ga-abụ na ọ bụ isi iyi nke nsogbu ahụ nakwa na ọ naghị emetụta ngwa ahụ ozugbo, mana na sistemụ ahụ, anyị nwere ike ịtọgharịa mmasị nke ngwa ahụ. Iji weghachi mmasị ngwa anyị na-aga Ntọala> Ngwa wee pịa taabụ niile.
Ọzọ, anyị na-aga na menu dị na akuku aka nri nke ihuenyo ahụ, nke akara ngosi atọ kwụpụtara, wee họrọ Tọgharia mmasị. Tupu ikwenye usoro ahụ, gam akporo ga-egosi anyị ozi na-egosi na mmasị nke ngwa niile nwere nkwarụ, nkwupụta nke ngwa nwere nkwarụ, ngwa maka omume ndabara, mgbochi data ndabere maka ngwa yana ikike ikike niile.
Ozugbo anyị mechara usoro a, ma anyị enyochala otu ngwa nke nyere anyị nsogbu siri rụọ ọrụ ọzọ, anyị ga-ọzọ ịtọ ntọala na iche iche Ngwa ọ bụla nwere, dịka ọ nwere ike ịnweta ọnọdụ, data mkpanaka ...
Hichapụ data sitere na ọrụ Google Play
Ọ bụrụ na ị gbalịsịrị nhọrọ niile gara aga, ihe niile yiri ka ọ na-egosi na nsogbu ahụ anaghị ebi na ngwa ahụ n'onwe ya, mana na anyị na-ahụ ya na ọrụ Google Play. Google Play Ọrụ bụ gam akporo usoro ngwa na na-enye ohere ịnweta ngwa ngwa niile oge niile ha na-ahụkwa na a na-emelite ngwa niile oge niile na ụdị kachasị dịnụ.
Site n'ime nke a, ihe niile masịrị na ntọala setịpụrụ na Google Play ga-ehichapụ. Iweghachi ndabara ntọala. Ihichapu data sitere na ọrụ Google Play, anyị na-aga Ntọala> Ngwa wee pịa Ọrụ Google Play. Ọzọ anyị ga-ehichapụ data, n'ime ngalaba Nchekwa ma kwado nhichapụ data niile sitere na ngwa a kpamkpam.
Ngwaọrụ nrụpụta ụlọ
Ọ bụrụ na otu n'ime ụzọ ndị a edozi nsogbu com.google.process.gapps, ọ ga-ekwe omume, ọ bụ ezie na o yighị, na nsogbu ahụ dị na ikpeazụ update ngwaọrụ natara, n'ihi ya, iji chịkwaa ya, anyị ga-nrụpụta nrụpụta ngwaọrụ. Site na ịme usoro a, ngwaọrụ ahụ ga-alaghachi na nsụgharị mbụ nke gam akporo nke ọ jiri bịa ahịa.
Iji weghachite ntọala ụlọ ọrụ ngwaọrụ, anyị ga-aga Ntọala> Ndabere ma tọgharịa ma họrọ nhọrọ nrụpụta data Factlọ ọrụ. Usoro a ga-ehichapụ ngwa niile, yana foto niile na data dị na ọdụ ahụ, yabụ na mbụ, anyị ga-eme otu data niile anyị chọrọ idebe, ọkachasị foto na vidiyo ndị anyị were. na ngwaọrụ, ebe ọ bụ na mgbe e mesịrị a gaghị enwe ụzọ isi weghachite ha a posteriori, maka ọtụtụ ngwa anyị na-anwale.
Otu nhọrọ iji mee nke a bụ ịbanye a kaadị ebe nchekwa na ngwaọrụ ma bugharịa ihe oyiyi na vidiyo niile, yana data ahụ, anyị chọrọ idobe, iji nweghachi ha n'aka mgbe anyị weghachitere ngwaọrụ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Etu esi edozi usoro "com.google.process.gapps akwụsịla" mperi
Ndewo, enwetara m njehie a mana ọ naghị enye m ohere itinye ntọala ma ọ bụ ebe ọ bụla n'ihi na ozi ahụ pụtara ọzọ ... ọ bụrụ na ọ dị na ntọala ... ntọala akwụsịla ... wee gabazie na ihe niile m na-agbalị ịbanye. Yabụ azịza ị nyere na ọgbakọ a abụghị maka m. Enwere usoro iji tọgharịa mbadamba ụlọ ọrụ na-enweghị ịbanye nhọrọ ọ bụla? n'ihi na anaghị m ahụ ngwọta ọ bụla ọzọ ... ọ bụrụ na ị maara nke ọ bụla, m ga-enwe ekele ma ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka
Ekwenyere m na nkwupụta gara aga, nkọwa ha nyere bụ enweghị ezi uche n'ihi na ọ bụrụ na nsogbu ahụ bụ na ọ naghị enye ohere n'ihi na akwụsịla ngwa ahụ, ọ bụ ihe nzuzu n'ihe ị na-ekwu n'ihi na otu onye si abanye ihichapụ data nchekwa, ọ bụrụ na nke ọ bụla ngwa na-agwa gị otu ihe ahụ,
Ekwenyere m na okwu gara aga, na nkọwa ha na-enye adịghịdị njọ n'ihi na ọ bụrụ na nsogbu ahụ bụ na ọ naghị enye ohere n'ihi na akwụsịla ngwa ahụ, ọ bụ ihe nzuzu ihe ị na-ekwu n'ihi na olee otu mmadụ si ehichapụ data nchekwa, ọ bụrụ ngwa obula na-agwa otu ihe, mmmmm